Qingdao Huaxin Group Co., Ltd itholakala entshonalanga umkhakha edolobheni epaki, Jiaonan, Qingdao edolobheni, eduze kwindlela emithathu emgwaqeni amamitha 100 kude, Jiaoji ujantshi, liuting sezindiza zamazwe ngamazwe, ababekade bay isikebhe, ezweni nasolwandle futhi air zokuthutha izixhumanisi , indawo ekahle kakhulu.
Inkampani eyasungulwa ngo-1998, is a kuhlangene ukwakha production, izimboni, amapulazi akhiqiza ukufakwa, yokuthengisa and service nesitha amabhizinisi besebenza ndawonye. Ukulingisa uqalile ukwakha isizinda yasekhaya ukukhiqizwa imishini nemishini. Inkampani ikakhulukazi abasebenzi lobuchwepheshe, abaphathi kanye nabasebenzi workshop kufanele iminyaka engaphezu kweyishumi of nakho ukukhiqiza e ubuchwepheshe asakazwe umkhakha.
(A) QXY uchungechunge steel plate, iphrofayela esingu kuqhuma umshini ahlanzekile-up, Q32 zilandelwa esingu kuqhuma umshini ahlanzekile-up, Q37 uchungechunge hook uhlobo airless esingu kuqhuma wokuhlanza umshini, Q38, Q48 uchungechunge uchungechunge uhlanganyela esingu kuqhuma umshini ahlanzekile-up, Q69 uchungechunge ujantshi steel plate, isakhiwo esingu kuqhuma yokuhlanza umshini. Q35 uhlobo turnable, Q76 uchungechunge shot kuqhuma umshini ahlanzekile-up, QGW uchungechunge steel pipe udonga lwangaphandle umshini ahlanzekile-up, Q31 sigubhu-uhlobo umshini ahlanzekile-up, S11series isihlabathi mixer.
(B) umshini Molding: Z143 chungechunge, Z145 chungechunge, Z146 chungechunge, Z148 uchungechunge
Core sokudubula umshini: Z86series, ZHTO600 / 700, ZH87series, Z94 uchungechunge
Shell core umshini: Z95 uchungechunge
(C) yonyaka ukukhiqizwa umthamo 3000 kuya 10000 amathani uchungechunge isihlabathi resin-eziboshiwe, umugqa ukukhiqizwa ubumba isihlabathi.
(D) isithembiso izidingo ezikhethekile abasebenzisi ezihlukahlukene ahlanzekile-up isihlabathi handling imishini kanye izinhlobo ezahlukene design mechanical, ukukhiqizwa.
Le nkampani ine amandla eqinile lobuchwepheshe, ukukhiqizwa izinto zobuchwepheshe obuphambili, ephelele ukuthola izindlela, ezesayensi management system futhi esiqinile ikhwalithi uhlelo ngokuhambisana nezidingo zomhlaba wonke ukusebenzisa.
Inkampani yethu banamathele "ukuthembeka + izinga + emisha + inkonzo" umqondo ukumaketha, ukukhiqiza izinto zobuchwepheshe obuphambili, esiqinile nezidingo izinga, uhla egcwele ukulawula nokuphatha. Market -oriented idumela, service ngobuqotho njengoba nombandela.
Inkampani bonke abasebenzi ukwamukela abantu abavela emhlabeni wonke ukuze ujoyine, ukwamukela amakhasimende amasha namadala ukuza futhi liqondise umsebenzi.